Osama Bin Laden.. Shahiid Sharfan oo 6 Sanadood Kadib Aan Meydkiisa Meelna Lagu Sheegin WARBIXIN.
Tuesday May 02, 2017 - 19:00:39 in Wararka by Super Admin
2,May,2011 maanta oo kale ayay dowladda Mareykanka ku dhawaaqday in wadanka Pakistan ay ku dishay Sheekh Osama Bin Laden hoggaamiyihii Hore ee Mujaahidiinta Al Qaacidda.
Sheekh Osama Bin Laden amirkii Mujaahidiinta Al Qaacidda
Sheekh Osama Bin Laden oo ahaa Halyeey caan ka ahaa caalamka islaamka iyo reer galbeedka ayaa ka tagay Taariikh dahabi ah oo gabigeed laga dheehan karo deeqsinimo,geesinimo,Jihaad iyo wadna goynta cadawga muslimiinta.
Bin Laden ayaa lagu dilay degmada Otobad ee duleedka magaalada caasimadda u ah Pakistan,dilkiisa waxaa la sheegay in ay fuliyeen ciidamo katirsan kummaandooska Mareykanka balse mugdi ayaa kujira qaabka uu u dhacay dilkiisa.
Dowladda Mareykanka oo ku daashay dagaalka ay kula jirto Sheekh Osama Bin Laden iyo saaxiibadiisa ayaa diiday in ay soo bandhigto Meydka sheekha iyadoona sheegtay in meydka shahiidka ay ku aastay gunta hoose ee badda arrinkaasi oo shaki badan dhaliyay.
6 Sanadood kadib dilka sheikh Osama waxaa sii xoogaystay awoodda jamaacaadka jihaadiga caalamiga ah waxaana sare ukacay dadka ku biiraya jihaadka arrinkaasi oo waxba kama jiraan ka dhigaya u dabaal daggii mareykanka ee dilka Bin Laden.
Mujaahidiinta ayaa dhul ballaaran ka qabsaday wadamada Ciraaq,Suuriya,Naigeria,Yemen iyo Liibiya sidoo kale waxaa sare ukacay weerarada caalamiga ah ee Jihaadiyiintu ay ku beegsanayaan reer galbeedka iyo xulufadiisa.
Weeraradii ugu dhiig daadashada badnaa ee lagu qaaday qaarada Yurub wixii ka dambeeyay dilkii sheikh Osama Bin Laden waxaa kamid ah weeraradii Paris ee sanad gudahood ka dhacay, weeraradii dalka Biljamka, weerarkii Tuunis ee dadka reer galbeedka lagu laayay, weerarkii diyaaradda Ruushka lagu burburiyay ee dalka Masar ka dhacay iyo kuwa kale oo dhammaantood ka dhan ahaa reer galbeedka.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in USA iyo Reer Yurub aysan mahadin dilka sheikh Osama Bin Laden waxaana caalamka islaamka kasoo baxay Osaamayaal kale oo wali taxaddi ku ah dadka aan Muslimka aheyn.
Sheekh Osama Bin Laden oo ahaa Hantiile kasoo jeeda dalka Sacuudiga ayaa isagoo shahiiday malaayiin qof taageerayaal ah ku leh caalamka.
Taageerayaasha Jihaadka caalamiga ah ayaa sheekh Osama Bin Laden ku sheega in uu yahay Imaamka zamankan waana daraja weyn oo uu ku helay difaacida dadka muslimiinta ee la dulmiyay. ma ahan oo kaliya in uu agaasimay weeraradii 11 September ee wuxuu ahaa halyeey deeqsi ah oo lacago malaayiin dollar ah ku bixiyay kaalmeynta agoonta iyo dadka Fuqarada ah.
W/D Warfaa Kheyrdoon
Guddoomiye Waaxeed iyo Mid Kamida Odayaashii Soo Xulay Xildhibaannada Baarlamaanka Oo Muqdisho lagu Dilay.